Maxaa keenay in Laba Sabti oo isku xiga Alshabab weerarro ku qaado "Aagga cagaaran" ee Muqdisho? | Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis.
Maxaa keenay in Laba Sabti oo isku xiga Alshabab weerarro ku qaado “Aagga cagaaran” ee Muqdisho?
Kan hore, wuxuu ka dhacay xarunta Otto Otto, Sabtidii ay bisha Luulyo ahayd 7, kan kalena wuxuu dhacay Sabtidii xigtay ee bishu ahayd 14-ka Luulyo. Min laba qarax oo dabley rasaas ridaysa ku xigtay ayey ahaayeen.
Su’aasha soo noqnoqotay waxay tahay: sidee ku dhacday in ayadoo amniga waddada goobahaas dhex marta la adkeeyey, shacabkana laga xiray, misna Al Shabaab ay gudaha u galaan oo qaraxyo iyo rasaas ku weeraraan askartii iyo shaqaalihii dawladda.
G/sare Cabdi Xasan Xuseen (Cabdi Yare) wuxuu ahaa madaxii hay’adda sirdoonka Puntland (PIA), wuxuuna sannadihii 2015 -2015 agaasime ka ahaa xarunta isku xirka hawlgallada wadajira (joint operations coordination centre) oo loo soo gaabiyo JOCC.
“Al Shabaab awoodoodi way daciiftay, mar walboo ay diciifaanna qar-iska-xoornimada way siyaadiyaan, ayagoo uga gol leh inay diraan farriin ah ‘waan jirnaa waanan xoog badannahay'” ayuu yiri Cabdi Yare.
Laakinse cabdi yare meesha kama uusan saarin, sida ay dad badanba qabaan, in la sii ogaan karay ama la sii ogaaday weerarrada, hase yeeshee “waxaa laga yaabaa in xogta ay kala dhiman tahay, oo laga yaabo in aadan helin wakhtiga saxda ah ee ay wax dhacayaan iyo goobta saxda ah ee ay wax ka dhacayaan” ayuu yiri.
Wuxuu shaki ka muujiyey oo uusan carrabka ku dhifan inay jirto iyo in kale in dad gudaha ku jira ay hawsha wax ka og yihiin, isagoo ku gaabsaday “waa arrin baaritaan u baahan, laakin wuxuu farta ku fiiqay in gaabis uu jiro.
Mar uu ka hadlayey sida looga hortagi karo weerarrada noocaas oo kale ah, wuxuu sheegay Cabdi Yare in mas’uuliyadda 1aad ay saaran tahay ciidanka amaanka “wixii debac ah ama khalkhal ah oo ku dhex jira waa inay saaraan, dadkuna waa inay la shaqeeyaan ciidanka oo xogta ay la wadaagaan” ayuu yiri Cabdi Yare.
Haddaba, haddii laba Sabti ay dheceen laba weerar oo isku eg, oo ka dhacay laba meel oo aan ka fogayn xarumihii muhiimka ahaa ee dawladda, arrintaas dareen iyo feejignaan dheeri ah ma gelin doontaa hay’adaha amaanka ee dawladda Soomaaliya, si ay uga hortagaan in mar kale la soo weeraro?
Previous articleJeneraal ka tirsanaa Ciidamadii Xoogga Dalka oo toogasho lagu dilay duleedka degmada Afgooye
Next articleSAWIRRO: Madaxweynihii hore ee Mareykanka Barack Obama oo booqasho ku jooga dalka Kenya